मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन- ‘काम नगर्ने ठेकेदारको जमानत जफत गर्नुस्’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
मंसिर १०, २०७६ बिनु सुवेदी
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आ–आफ्ना मन्त्रालयमा भएका ठेक्काको स्थिति १५ दिनभित्र बुझाउन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । सरकारको चौमासिक समीक्षा बैठकलाई सोमबार सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै ओलीले गुणस्तरीय काम समयमा हुन नसक्नुको कारण खोज्न र काम गर्न नसक्ने ठेकेदारको जमानत जफत गर्न निर्देशन दिए ।
उनले सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूसँग छुट्टै बसेर विषय केन्द्रित छलफल पनि गर्ने बताए । सरकारले अपेक्षाअनुरूप पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको टिप्पणी ओलीको छ । ‘पुँजीगत खर्च गर्दा किन समस्या भइरहेको छ, त्यसलाई पहिल्याउनुपर्‍यो,’ मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव छ भने त्यो गर्नुपर्‍यो, कर्मचारीको अभाव छ भने पनि पूरा गरिहाल्नुपर्‍यो, कानुनी जटिलता छन् भने फुकाउनुपर्‍यो, बजेटको समस्या हो भने हल गर्नुपर्‍यो तर काम नगरी बस्न भएन ।’ आइतबारसम्म पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
प्रकाशित : मंसिर १०, २०७६ ०७:२३
हङकङ चुनावमा 'लोकतन्त्र पक्षधर'को ऐतिहासिक जित
जिल्ला परिषद् चुनावको नतिजाअनुसार सरकार अघि बढ्ने कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामको भनाइ
मंसिर ९, २०७६ (एजेन्सी)
हङकङ — हङकङमा आइतबार सम्पन्न जिल्ला परिषद् चुनावमा लोकतन्त्र पक्षधरले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार १८ मध्ये १७ जिल्लामा लोकतन्त्र पक्षधरले पकड जमाएका छन् ।
सरकारविरोधी प्रदर्शनका कारण ६ महिनायता अशान्त रहेको हङकङमा आइतबार भएको जिल्ला परिषद्को चुनावमा ७१ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ९४ हजार मत खसेको थियो । जुन यसअघि सन् २०१५ मा भएको चुनावमा खसेको भन्दा २४ प्रतिशत बढी हो ।
चुनावमा लोकतन्त्र पक्षधरले करिब ६० प्रतिशत मत प्राप्त गरेका भए पनि सिट संख्याका हिसाबले अभूतपूर्व नतिजा ल्याउन सफल भएका हुन् । जम्मा ४ सय ५२ स्थानमध्ये लोकतन्त्र पक्षधरले ३ सय ४७ स्थानमा कब्जा जमाएका छन् । बेइजिङ समर्थक उम्मेदवारले ६० स्थानमा मात्र जितेका छन् । ४५ स्थानमा विजयी भएका स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये अधिकांश लोकतन्त्र पक्षधर रहेका जनाइएको छ ।
सन् २०१५ मा भएको चुनावमा बेइजिङ समर्थक उम्मेदवारले २ सय ९२ सिट जितेका थिए । १ सय १६ स्थानमा लोकतन्त्र पक्षधर र २३ स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।
चुनावलाई संकटमा परेकी हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामको समर्थनको परीक्षाको रूपमा हेरिएको थियो । चुनावमा प्रजातन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारी समूहहरूले ६ महिनासम्मको तनाव र प्रदर्शनपछि चिनियाँ सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिन चाहेको देखिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । बेइजिङ पक्षधर उम्मेदवारले लामो समयदेखि चलिरहेका प्रहरी–प्रदर्शनकारी झडपप्रतिको असन्तुष्टि पोख्न आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
चुनावी नतिजा सार्वजनिक भएसँगै कार्यकारी प्रमुख लामले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘सरकारले चुनावी नतिजाको सम्मान गर्ने’ बताएकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘सरकारले जनताका सदस्यको विचार सुन्नेछ र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नेछ ।’ मतदानका क्रममा उनले जिल्ला परिषद्का आवाज अझै ध्यान दिएर सुन्ने भन्दै समर्थन जुटाउने प्रयास गरेकी थिइन् ।
चुनावमा लोकतन्त्र पक्षधरले पहिलेको भन्दा राम्रो ल्याउने अनुमान गरिएपछि बेइजिङ पक्षधर नराम्रोसँग पराजित हुन्छन् भनेर अपेक्षा नगरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । चुनावी नतिजासँगै क्यारी लाम प्रशासन आगामी दिनमा प्रदर्शनकारीका कुरा सुन्न थप दबाबमा परेको छ ।
हङकङका जिल्ला पार्षदहरूले सडक तथा फोहोरमैला संकलनजस्ता विषयमा सरोकार राख्दछन् । प्रमुख कार्यकारी प्रमुख रोज्ने विषयमा उनीहरूको भूमिका न्यून हुन्छ । चुनावी व्यवस्थाअनुसार १ सय १७ जना जिल्ला पार्षद कार्यकारी प्रमुख चुन्ने १ हजार २ सय सदस्यीय समितिमा रहनेछन् ।
चुनावी नतिजाप्रति चीनले भने हालसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । तर चिनियाँ विदेशमन्त्रीले भने चुनावी नतिजाले भने चीनका लागि खासै फरक नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
वाङ यीले भनेका छन्, ‘के भयो भन्नेले खासै फरक पार्दैन, हङकङ चीनको भूमि हो ।’ उनले हङकङ खेल्न चाहने बाह्य शक्ति असफल हुने दाबी गरे । ‘हङकङमा अराजकता फैल्याउने तथा यसको समृद्धि र स्थायित्व बिथोल्न खोज्नेहरु सधैं असफल हुन्छन्,’ उनले भने ।
चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाले भने मतगणना गरिएको जनाएपछि नतिजाबारे विस्तृत विवरण उल्लेख गरेको छैन ।
को–को सफल ?
विवादास्पद छविका बेइजिङ पक्षधर सांसद जुनियस हो अनपेक्षित रूपमा पराजित भएका छन् । समर्थकको भेषमा आएका एक व्यक्तिले नोभेम्बर सुरुमा उनलाई चक्कु प्रहार गरेका थिए । सरकारविरोधी प्रदर्शनमा अनावश्यक दमन गरेको आलोचना खेपिरहेको हङकङ प्रहरीको समर्थनमा पटकपटक बोलेपछि उनी निकै विवादमा आएका थिए ।
पछिल्लो समय नागरिक मानवअधिकार मञ्चका प्रमुख नेताका रूपमा छवि बनाएका राजनीतिक अभियानकर्मी जिम्मी साम पनि विजयी भएका छन् । उनी पनि पहिलो पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका थिए । पटक–पटक सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका साममाथि दुईपटक आक्रमण भएको थियो । लोकतान्त्रिक अभियानकर्मी जोसुवा वोङलाई भने चुनावमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाइएको थियो । उनको स्थानमा उठेका प्रजातन्त्रवादी उम्मेदवार पनि विजयी भएको बताइएको छ ।
चुनावमा हार भोगेकी बेइजिङ समर्थक सांसद एलिस माकले पराजयको आंशिक दोष कार्यकारी प्रमुख लामको शासन शैलीलाई दिएकी छन् । सहरको सबैभन्दा ठूलो बेइजिङ पक्षधर दलकी सहअध्यक्ष स्टारी ली वाइकिङ भने विजयी भएकी बीबीसीले जनाएको छ ।
सरकारविरोधी प्रदर्शन किन ?
हङकङ सरकारले गत जुनमा विवादास्पद सुपुदर्गी विधेयक पारित गराउने सरकारी योजनाको विरोधमा प्रदर्शन सुरु भएको विरोध प्रदर्शन पछिल्ला दिनमा विधेयकको खारेजी तथा हङकङकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामको राजीनामामा केन्द्रित छ ।
प्रकाशित : मंसिर ९, २०७६ २०:१८